GALEYDH KADIB,MAXAA CABDIQASSIM LA GUDBOON ?
Mogadishu, 28th October 2001
Sidii la sugayay, waxaa saaka ( 28/10/2001) Baarlamaanka Soomaaliyeed uu kala noqday kalsoonidii Dawladda KMG ah ee uu Cali Khaliif Galaydh madaxda ka ahaa, kadib markii ay aqlabiyad xoog leh xubnaha golaha ay codkooda ku dhiibteen inay ka soo horjeedaan, oo ay diiddan yihiin habka Xukuumadda KMG ah wax u maamushay sanadkii ina soo dhaafay, halkaasna uu af hayeenka Baarlamaanka Cabdalla Deerow Isaaq uu ku guddoomiyay inay dhacday Dawladdii Cali Khaliif .
Waxay arrintanna soo af-jartay khilaafaadkii iyo is-afgaran waagii dhexyiilay in muddo ah Cabdiqassim Salaad iyo Cali Khaliif oo la xiriiray ka tarjumidda iyo ku dhaqanka axdigii lagu soo celinayay jiritaanka Qaranka Soomaaliyeed ee lagu soo guddoomiyay sanadkii tagay kulankii Carta (Jabuuti) iyo waliba ixtiraamka iyo wada shaqeynta maamul ee ka dhexeysa Madaxweyne iyo Ra'iisul Wasaare oo meesha ka baxay, taas oo keentay in Madaxii Golaha Wasaraddu uu si caddaan ah uga sheego idaacadda bbc-da hadalo liddi ku ah Madaxdiisa oo ku canaanatay maamul xumadiisii.
Hadaba iyadoo la wada ogsoon yahay xaaladda murugsan ee ay maanta Soomaaliya taariikhdeeda mareyso, oo midnimadeeda halisi ku jirto, dalkiina u kala qoqoban yahay gobolo qaarkood sheeganayo madaxbanaani, oo ay jiraan Hogaamiye Kooxeedyo hubeysan oo qaarkood gacansaar la leh Dawlado ajnabi ah, oo uusan dalka ka jirin amni iyo maamul midna, shacabweynuhuna uusan garaneyn haba yaraatee cid uu ku kalsoonaan karo, markii uu ku hungoobay Dawladii ugu horreysay ee la helay kadib burburkii nidaamkii Siyaad Barre, ayaa waxaa is-weydiin mudan waxa iminka la gudboon Cabdiqassim ! Sida dhabtu tahay arrintu ma aha mid fudud,waayo iminka lama joogo waagii(1960s) uu Madaxweyne si sahlan oo dastuuri ah u soo magacaabi jiray Ra'iisul Wasaare.
Waxaa loo baahan yahay inuu si aad ah oo feejigan uga baaran dego intii aanu magacaabin ciddii bedeli lahayd Cali Khaliif. Waa inuu helaa qof miisaaman oo ka socda gobolada Waqooyi Bari ama Waqooyi Galbeed,oo u leh khibrad maamulka Dawladda, kasbana kara kalsoonida shacabka iyo Baaralamaanka . Waa inuu yahay qof xamili kara mas'uuliyadda ballaaran ee loo dhiibaya , dulqaadna u leh .
Dhanka wada shaqeynta golihiisa Wasiirada , waa inay meesha ka baxdaan waxyaabihii xumxumaa ee ay caadeysteen xubnaha Xukuumaddan dhacday oo ay ugu horreyso dibad-wareegga aan micnaha ku fadhin, ku takri-falka xoolaha ummadda iyo is-eegashada iyo hinaaska caadada u noqotay wasiiradii hore qaarkood. Waa inuu jiraa dishibiliin adag iyo la xisaabtan joogto ah iyo wada shaqeyn ka dhexeysa wasaaradaha Dawladda .
Sidoo kale, waa in Ra'iisul Wasaaraha cusub iyo golihiisa wasiirada ay si toos ah ula shaqeeyaan Baarlamaanka, uguna bandhigaan barnaamijyadooda iyo xisaabaadkooda , si guddiyada baarlamaanka ee qaabilsan u-kuur galida kharashyada Dawladda u gutaan waajibaadkooda , iyadoon cidna is-xumeyn, sidii ku dhacday maamulkii Cali Khaliif .Waa in gole kasta (any cabinet) ogaadaa in lala xisaabtami karo, lana ridi karo. Iyadoo ay jiraan arrimahaa aanu soo xusnay iyo qaar kaloo badanba , oo u baahan inuu si taxadir leh uga fiirsado tallaabadiisa xigta, ayaa hadana waxaad moodaa inuu Cabdiqassim haysanba waqti ku filan oo uu uga baaraan dego magacaabidda Ra'iisul Wasaare,waayo waxaa jira arrimo kale oo aan ugu jirin ku-talagalkiisa oo iminka soo foodsaaray.
Ta ugu horreysa waa shirka uu Madaxweyne Danial Arab Moi ugu yeeray Nairobi 4ta bisha soo socota ee November 2001 madaxda dalalka Jabuuti iyo Eretreya , isagoo isla markaana ku martiqaaday Xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya iyo Hogaamiye Kooxeedyada ka soo horjeeda . Wuxuuna qabashada shirkan oo salka ku haya dadaalka Mareykanku ugu jira la-dagaalanka argagixisada mandiqaddan (Horn of Africa) saameyn ku yeelan karaa inuu soo dedejiyo Cabdiqassim magacaabidda Ra,iisal Wasaare cusub .
Arrinka labaad ee xasaasiga ku ah Cabdiqassim waa Qaramada Midoobay oo dhowaan ka furatay Xafiiskeeda magaalada Baydhaba oo sida laga warqabo gacanta uga jirta isbaheysiga mucaaradka, waxayna tallaabadan dhabarjab ku tahay ictiraafka uu Cabdiqassim ka haystay Koofi Anan iyo dadaalka uu ugu jiray in UNka maktab ka furtaan Muqdisha.
Ta saddexaad ee jirta waa gacan ku haynta ciidamada Dawladda ee magaalada muhiimka ah ee Kismaayo oo khatar ku jirta oo sida wararku sheegeen ay ciidamada mucaaraadku qabsadeen magaala madaxda Gobolka Jubbada Dhexe ee Bu'aale, iminkana ay isu diyaarinayaan inay soo weeraraan Kismaayo, taasi oo niyad-jab ku ah Xukuumadda KMG ah .
Arrinka afraad ee soo kordhay waa xiriirka soo wanaag sanaaday ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Somaliland ,waana dhacda lama filaan ku noqotay Muqdisha,waayo waxay Jabuuti dowr weyn ku lahayd qabashadii shirkii Carte iyo aas-aaskii Dawladda KMG ah .
In kastoo wax sidaa u buurran aysan Jabuuti siinin Hargeisa,oo aan ka ahayn ogolaanshaha isu-socodka dadweynaha labada dhinac iyo in cadaawadda la joojiyo, hadana guul weyn bey u tahay tallaabadan Cigaal oo beryahanba lagu kacsanaa .
Isku soo wada duuboo hadii la tixgeliyo afartaa arrimood ee aan soo xusnay iyo warbixintii yareyd ee ka horreysay kuna saabsanyd xaaladda dalku marayo maanta, waxaan is leenahay kala doorashada hortaala Cabdiqassim ma aha mid sahlan.
Si kastaba arrintu ha ahaatee dadka wax indha-indheeya waxay leeyihiin inuu Xasan Abshir u soo magacaabo jagada Ra'iisul Wasaaraha ayaa noqon karta suuragal iyo xalka ugu haboon marka loo eego xaaladda Punland oo iminka aan degeneyn, lagana yaabo inayba soo noqdaan marka la magacaabo. Waxaa kaloo xusid mudan Ku-Xigeenkii Ra'iisul Wasaarihii hore Cusmaan Jaamac oo isna suuragal noqon kara magacaabidiisa .